Saddex Xildhibaan oo Daqiiqado gudahood kusoo baxay Doorasho aan lagu tartamin (Sawirro) | Allbanaadir.com
Home NEWS Saddex Xildhibaan oo Daqiiqado gudahood kusoo baxay Doorasho aan lagu tartamin (Sawirro)
Saddex Xildhibaan oo Daqiiqado gudahood kusoo baxay Doorasho aan lagu tartamin (Sawirro)
Magaalada Muqdisho waxaa saakay ka socota doorashada kuraasta xildhibaano kamid noqonaya gollaha shacabka ee Baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa gobolada Waqooyi matalaya.
Doorashada saakay ka socota magaalada Muqdisho waxaa kursiga hore ee tirsigiisu ahaa HOP#226 ku guuleestay Marwo Maryan Maxamed Ciise kadib markii doorashada ka tanaasushay musharaxii la tartameysay Marwo, Khadiija Cali Warsame.
Kursiga labaad ee doorashadiisa saakay ka dhacday magaalada Muqdisho oo isna tirsigiisu yahay HOP#218 waxaa ku guuleestay Dr Maxamed Elmi Ibraahim kadib markii isna u tanaasulay musharaxii la tartamayay Abdiraxmaan Cismaan Xuseen.
Waxaa sidoo kale kursiga saddexaad oo tirsigiisu yahay HOP#270 ku guuleestay Abdiwahaab Cabdi Cumar oo doorashada uga tanaasushay Muna Axmed Diiriye oo la tartameysay.
Doorashada xildhibaanada gollaha shacabka ku matalaya gobolada Waqooyi ayaa inta badan noqday kuwa aan lagu tartamin oo xildhibaanada kusoo baxay horey usoo wateen musharaxiin malxiis ah oo doorashada kahor u tanaasulay.
Soomaaliya sanadkan doorashada ka socota ayaa u muuqata tii ugu musuqmaasuqa badneed ,waxaana inta badan doorashada noqotay kuwa loo xiray musharaxiin gaar loo watay kuwaa oo kusoo wada baxay.
Previous articleA Call for Regulating Expensive Private Hospitals in Mogadishu
Next articleIska horimaad ka dhacay magaalada Garawe iyo faah faahino kasoo baxaya